धनी सूची रूस रिसोर्ट्स यसको विविधता पराउँछु र पनि सबै भन्दा मांग ग्राहक को यात्रा पूरा गर्न सक्छन्। सबै यो र थप हामीलाई - यो आवश्यक छैन विदेश आफ्नो स्वास्थ्य र बलौटे समुद्री तट मा Sunbathing सुधार गर्न जाने हो। उर्वर भूमि यसको भव्य काला सागर छुट्टी स्थलहरू, स्किइङ र स्पा र साहसिक रिसोर्ट्स लागि प्रसिद्ध छ।
रूसी संघ मा हरेक शहर - यसको अद्वितीय ठाँउहरु र स्मारक एउटा सुन्दर क्षेत्र हो। रूसी रिसोर्ट्स - सुंदर सौन्दर्य पूर्ण अनुरूप छ। घरमा आराम, तपाईं भाषा बाधाओं र acclimatization समस्या सामना छैन।
पेंशन, निको स्पा र होटल स्वास्थ्य र आराम सेवाहरूको एक विस्तृत श्रृंखला प्रस्ताव गर्नेछ। सहज जलवायु, किफायती मूल्य निर्धारण, सुन्दर दृश्यहरु र अद्वितीय कल्याण कार्यक्रम - विदेश आफ्नो घरमा फरक छ। यहाँ नागरिकहरु बीच लोकप्रिय छन् र उच्च सेवा स्तर ग्यारेन्टी कि रूसी रिसोर्ट्स एउटा सानो सूची छ।
स्पा सेन्टर - Sergievskie Mineralnye Vody
यस रिसोर्टमा केन्द्र को मुख्य विशेषता - Sulfuric ताल sernovodnymi निको Springs, एक व्यक्ति आफ्नो स्वास्थ्य सुधार गर्न मद्दत जो भरियो। सफा हावा र सभ्यता वन्यजन्तु द्वारा Untouched पर्यटकहरु आफ्नो शक्तिशाली ऊर्जा Recharge र ऊर्जा बढावा प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ। सम्झैताको प्रसिद्ध एक सुई माटोको र खनिज पानी।
यहाँ आउँदै, तपाईं girudoterapii, शंकुधारी स्नान र चिकित्सकीय अभ्यास मार्फत स्वास्थ्य उपचार गर्न सक्षम हुनेछ। गाउँमा त्यहाँ रोजगार व्यावसायिक डाक्टर जो धेरै स्वास्थ्य रिसोर्ट्स छन्। रूसी Hinterland पनि सांस्कृतिक र ऐतिहासिक साइटहरु मा धनी छ। रहस्यमय स्थान, अज्ञात नदी, untrodden बाटाहरू - सबै यहाँ प्रकृति संग एकान्त खोज्ने पर्यटकहरु आकर्षित गर्छ।
स्की रिसोर्ट स्पा - तल्लो Sergi
रूसी स्की रिसोर्ट्स को उर्वर भूमि भर छरिएका। सबै भन्दा राम्रो र सबै भन्दा सहज को एक रोचक नाम तल्लो Sergi (यूराल) अन्तर्गत शहर छ। एक वैज्ञानिक सिद्ध तथ्य - पर्यटक क्षेत्र शरीर मा एक लाभदायक प्रभाव जो चक भीर घेरिएको छ। यसलाई प्रसिद्ध स्की रिसोर्ट पहाड, पाइन जंगल, सहज अवस्था, स्नान र सुंदर पोखरी छ।
यहाँ यो स्की ढलान एक विशाल रिसोर्ट। यहाँ आउन - र तपाईंले ताजा हावा श्वास फेर्न र वरपरको प्राकृतिक परिदृश्य आनन्द लिन, यूराल को पहाड ढलान सवारी अवसर पाउनेछन्। मनोरञ्जन सेवाहरू बाहेक यहाँ चिकित्सकीय प्रक्रिया (चुम्बकीय चिकित्सा, hirudotherapy, माटोको उपचार, speleological, मालिश) आयोजना गरिन्छ। को रहस्यमय पवित्र मन्दिरमा सेटिङ अतिथिहरू, तपाईं निको Springs, पहाड र यूराल आतिथ्य को पहाड को संसारमा प्रवेश गर्नेछ।
प्यतिगोर्स्क - बहु माटोको स्पा सेन्टर
संग खनिज पानीका मुहानहरू सुन्दर शहर प्यतिगोर्स्क को Stavropol क्षेत्र मा स्थित तिनीहरूलाई हुन् रूस मा रिसोर्ट्स सूची विदेशी स्थानहरू लागि प्रसिद्ध छ। आज, आफ्नो विशाल क्षेत्रमा र्याडोन, कार्बन-हाइड्रोजन sulfide र खनिज पानी को चालीस भन्दा बढी लागि खोल्नुहोस्। यो एक उत्कृष्ट निदान सुविधा र आधुनिक प्रविधी सिर्जना गरियो। sanatoria र प्यतिगोर्स्क को स्वास्थ्य रिसोर्ट हृदय र gynecological रोगहरु, को स्नायु प्रणाली र musculoskeletal सिस्टम को रोगहरु व्यवहार गर्छन्।
बिल्कुल सबै पेंशन र balneological संस्थाहरू माथिल्लो श्वास रोग, को मेरुदण्ड र biliary सिस्टम को pathologies संग मानिसहरू हुन्। हरेक वर्ष पर्यटक आराम र स्वास्थ्यलाभ गर्नु कसरी विभिन्न देशहरूमा देखि यहाँ आउनुहोस्। यस रिसोर्टमा सबैभन्दा लोकप्रिय रिसोर्ट्स हुन् निम्न: "Stavropol को डन", "वसन्त", "लेनिन रक", "Pyatigorye" र "Narzan प्यतिगोर्स्क"।
सुदूर पूर्व - सक्रिय यात्री लागि चरम खेल
यो रिसोर्ट हलचल महानगरबारे मा शहर जीवनको थकित भएकाहरूलाई लागि हो। विशाल taiga यस रिमोट कुना र तपाईं शरीर र प्राण आराम गर्न सक्छन्। Inaccessibility, Untouched सभ्यता रहस्यमय भूमि गरेर राष्ट्रिय रिजर्व र शक्तिशाली ज्वालामुखियों राख्छ। लाभ को मुख्य पर्यटक जिल्ला:
यहाँ रहेको, तपाईं कहाँ कुनै हल्ला राजमार्गहरु, प्रदूषित प्रकृति र hamovityh पर्यटकहरु एक शान्त र लगभग एकांत छुट्टी आशा गर्न सक्छौं;
अचम्मको प्रकृति, सपना र जादू को संसारमा बाध्य पानी रात कैम्पफ़ायर आरामदायक र आकर्षक ध्वनि, यो जंगली संसारको भाग बन्न;
को ठाडो हिउँ छोपेको पथ, साहसिक, वैज्ञानिक र एथ्नोग्राफिक यात्रामा स्नोमोबिलिङ, शिकार, माछा मार्ने - पर्यटकहरूले चरम उत्तरी मनोरञ्जन प्रस्ताव गरिनेछ।
रूस को अद्वितीय काला सागर रिसोर्ट्स - Tuapse मा एक अविस्मरणीय साहसिक र समुद्र तट छुट्टी
को काकेशस, काला सागर तट को दक्षिणी ढलान, तेजस्वी पहाड परिदृश्य, अचम्मको झरने, canyons, नदी, प्राकृतिक स्मारक र अनुकूल पर्यावरण पृष्ठभूमि संग एक आरामदायक ठाँउ हो। Tuapse उचित मूल्य, वनको प्रशस्त, राम्रो-विकास पर्यटक उद्योग र औद्योगिक बिरुवाहरु को अभाव मा - यो सबै रहन स्मरणीय र सहज बनाउँछ।
शहर को तटीय पट्टी बनाइयो छ घरहरू र विभिन्न बाँध्न को होटल बोर्डिङ, sanatoriums निको। यो रिसोर्ट क्षेत्र पूर्ण बिभिन्न दर्शकहरुको पर्यटकहरुका लागि डिजाइन गरिएको छ। को जोर चिकित्सा आधार को गठन छ। अधिक पछिल्लो दशक, सक्रिय छोराछोरीको मनोरञ्जनको संगठन विकास गरे। Tuapse जिल्ला रूसी रिसोर्ट्स सूचीमा समावेश र विभिन्न अवकाश र रोचक भ्रमण मार्गहरू, सकारात्मक भावना र खुशी को समुद्र प्रदान गर्दछ छ।
Anapa - रूसी संघ को दक्षिण मा घाम शहर
सम्राट निकोलस म ईलाका यो आदरणीय स्थिति सम्मानित पछि रिसोर्ट को आधिकारिक इतिहास, 1846 मा सुरु भयो। त्यो समय देखि एक पर्यटक गन्तव्य intensively विकास गर्न थाले। Subtropical जलवायु, समुद्र, पहाड र steppe परिदृश्य, साथै काला सागर तट: यो प्राकृतिक अवस्था द्वारा facilitated थियो। सबै पक्षहरूमा आज Anapa रोचक - एक स्पा सेन्टर र समुद्र तट उपायको रूपमा।
ज्वालामुखी माटोको र उपचारात्मक नुनीन को अत्यधिक बर्नर स्रोतहरू संग प्रसिद्ध शहर। यहाँ Vacationing परिवार हुन सक्छ। शहर को अचम्मको स्थानहरूको रोमाञ्चक पर्यटन एक ज्वलन्त छाप छोड्न हुनेछ। र छोराछोरीलाई जहाँ शानदार शो समुद्र सिंह सुविधा को Dolphinarium, एउटा आकर्षक यात्रा रमाइलो हुनेछ।
आश्चर्यजनक sensations र सकारात्मक भावना रूसी रिसोर्ट्स दिनेछु। समुद्र बलौटे समुद्री तट, बाँकी को चरम प्रकार "नाडी को हानि गर्न," र रोचक परिचितहरू प्रदान गर्दछ। Anapa अलग्गै मा कम लोकप्रिय छैन पर्यटन प्रस्ताव सोची, Gelendzhik, Yeisk, Temryuk, Svetlogorsk। अद्वितीय स्थानहरु यस्तो किसिम vacationers को चिन्ता बारेमा भूल र आफूलाई तिहार को वातावरणमा डुबाउनु गर्न अनुमति दिन्छ।
किर्गिस्तान आकर्षण। ताल Issyk-KUL
फलाम पोर्ट, मनोरञ्जन केन्द्र "Mriya"। विवरण र समीक्षा
Crimea मा आराम।
धूम्रपान चिकन संग सिमी संग सलाद - तीन व्यञ्जनहरु धेरै रूपमा!
कसरी पर्खालहरु मा फफूंदी देखि छुटकारा प्राप्त गर्न?
सुरक्षित cruisers "Svetlana": इतिहास, फोटो
बिटा संस्करण के हो र किन आवश्यक छ?
Moschino इत्र - उत्तम र अद्वितीय सुगन्ध
सुनको धारा वास्तुकला